Localbitcoins ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း 2019 | ဖြစ် LocalBitcoins က ISO - ထရေးဒင်းအဘို့ကို Safe
"Highly အကြံပြု LocalBitcoins"
အလည်အပတ် LocalBitcoins ယခု
LocalBitcoins - ကဘေးကင်းလုံခြုံလား? တစ်ခုသို့မဟုတ်လိမ်လည်မှု?
LocalBitcoins Signup နှင့်ဝင်မည်
မှတဆင့်ငွေ Send နှင့်လက်ခံလုပ်နည်း LocalBitcoins
ဘယ်နှစ်ယောက်နိုင်ငံများတွင်ပူဇော် LocalBitcoins န်ဆောင်မှု?
အဘယ်အရာကို cryptocurrencies မ LocalBitcoins ထောက်ခံမှု?
ဘာဖြစ်သလဲ LocalBitcoins'' စျေးကွက် positioning ကို?
ထရေးဒင်း Secure မှအင်္ဂါရပ်များ
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်ကကျော်, အ cryptocurrency စျေးကွက် ရေရှည်ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်အကျိုးအမြတ် option ကိုဖြစ်လာမှစိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ လူသန်းပေါင်းများစွာယခုအမျိုးမျိုးသောငွေကြေးအားဝယ်ယူရန်အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြသည်။
နိုင်ငံတကာငွေလွှဲလုပ်သည့်အခါကောင်းပြီ, Bitcoin ကယ့်ကိုထိပ်တန်းရွေးချယ်မှုအလတ်စားမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းနှင့် Forex န်ဆောင်မှုများကဲ့သို့သောအခြားနည်းလမ်းများမှနှိုင်းယှဉ်လျှင်စျေးကြီးခြင်းနှင့်နှေးကွေးဖြစ်ဟုဆိုသည်ရဲ့။
သို့သော် LocalBitcoins သက်တူရွယ်တူစျေးကွက်တစ်ခုသက်တူရွယ်တူ၏ပုံစံအတွက်ဇာတ်ကြောင်းကိုပြောင်းလဲဖို့ကဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ Bitcoin ကုန်သွယ်မှုနဲ့ရယူမယ့်တော်လှန်ရေးသမားလမ်းနှင့်အတူ၎င်း၏အသုံးပြုသူများအတွက်ပေးပါသည်။ ဆိုက်မှတဆင့်သုံးစွဲသူများစာရင်းသကဲ့သို့ကောင်းစွာသူတို့ရဲ့ကြော်ငြာတွေကိုဖန်တီးနိုင်သည့်အလားအလာဝယ်လက်နှင့်ရောင်းသူနှင့်အတူထိတွေ့ရလည်းကြိုတင်ကုန်သွယ်မှုလက်မှတ်ထိုးဖို့အားလုံးကိုငွေပေးငွေယူအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအတည်ပြု။
ဖြတ်. LocalBitcoinsတစျသီအိုရီအဆိုစွဲချက်စုဆောင်းမရှိဘဲငွေလွှဲအပြီးသတ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံအရောင်းအတစ်နာရီသကဲ့သို့နည်းနည်းယူပါ။ ပလက်ဖောင်း Bitcoin ကုန်သွယ်၏ရှုပ်ထွေးသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုသို့တံခါးပေါက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ဒါဟာအသစ်အတွေဟာလည်းရောင်းချနေခြင်းနှင့် Bitcoin ဝယ်ယူလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ LocalBitcoins မြင့်မားသောဂုဏ်သတင်းကိုထိန်းသိမ်းနှင့် 248 နိုင်ငံများထက် ပို. အတွက်ရှေ့မှောက်တွင်ရှိပါတယ်သိရသည်။
LocalBitcoins လူတို့တွင် Bitcoin ၏တိုက်ရိုက်ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုထားကြောင်းစျေးကွက်စေ့စေ့ကြည့်ရှုရန်ရွယ်တူပါပဲ။ အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးခြင်းအတွက်စိတ်ဝင်စားနယူးဧည့်သည်များအတွက် Signup စာမျက်နှာသို့သွားရောက်လည်ပတ်သင့်ပါတယ်။ မည်သူမဆိုတက်လက်မှတ်ထိုးရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်၏မူဝါဒအရသိရသည်သူတို့၏အရာရှိတဦးကအမည်များပေးရန်လိုအပ်နေပါသည် LocalBitcoins.
သူတို့ကအစသင့်ရဲ့မှတ်ပုံတင်များအတွက်အစိုးရထုတ်ပေးဝိသေသလက္ခဏာသက်သေဘို့ကိုတောင်းပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကသူတို့ကိုသင်နှင့်အတူမျှဝေသတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးအတွက်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာမူဝါဒရှိသည်။ သင်တစ်ဦးကုန်သွယ်မှုအစပျိုးသည့်အခါအချို့ကရောင်းသူအများဆုံးကိစ္စများတွင်ပြုလုပ်ရွေးချယ်နိုင်မယ့်, သင့် ID ကိုတောင်းပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာပြီးတာနဲ့သူကသင့်ရဲ့ဧရိယာထဲမှာ Bitcoin ရောင်းသူဘို့အတွက် log နှင့်အမဲလိုက်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
LocalBitcoins လက်ခံနိုင်ဖွယ်, အဖွဲ့ဝင်များ ID ကိုစိစစ်အတည်ပြုလိုအပ်ချက်များကိုအပါအဝင်ရှာဖွေမှုနံပါတ်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန်ခွင့်ပြု ငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များနှင့်ရောင်းချသူနေရာများတွင်။ အသုံးပြုသူများသည်ရှာဖွေမှုစဉ်အတွင်းရောင်းချသူများ၏ကုန်သွယ်သမိုင်းနှင့်ဂုဏ်သတင်းကိုစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာရောင်းချသူနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုရှိသည်နှင့်ဆိုဆိုင်တဲ့ကိစ္စများဆွေးနွေးရန်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါစိစစ်မှုများပြည့်စုံကြသည်နှင့်တပြိုင်နက်, သင်ကုန်သွယ်ရေးစတင်ရန် "Buy" ပေါ်တွင် click လုပ်နိုင်ပါတယ်။ မဆိုငွေပေးငွေယူဖြည့်စွက်ခြင်းမပြုမီ, ကသင့်ရဲ့ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကို, ဝယ်ဖို့ပမာဏ, သင်အသုံးပြုနေတဲ့ပါလိမ့်မယ် ID ကို၏ပုံစံကိုအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည့်င်နှင့်မည်သို့သင် Bitcoin ခံယူချင်ပါတယ်။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ LocalBitcoins သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန်ကြောင်းအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအချက်များထည့်သွင်း။
ပလက်ဖောင်းသင်မြောက်မြားစွာငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များမှတဆင့် Bitcoin ဝယ်ရောင်းဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
Google Wallet က
အသုံးပြုတဲ့အခါ LocalBitcoinsလူတစ်ဦးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းအတွက် Bitcoin ဝယ်ယူရန်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ homepage တွင်ကြော်ငြာများနှင့်စာရင်းများရှိပါတယ်။ အဆိုပါစာရင်းများထဲကတစ်ခုပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါနှင့် Bitcoin ပေါ်တွင်ကုန်သည်ရဲ့စျေးနှုန်းကိုကြည့်ပါ။ သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကြော်ငြာထည့်သွင်းဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။
သင်တစ်ဦးကုန်သွယ်မှုအစပျိုးပြီးတာနဲ့သင်ကပလက်ဖောင်းသို့ပေါင်းစည်းအတွက်အာမခံငွေဖြစ်စဉ်ကိုဖြတ်သန်းသွားရန်ရှိသည်။ သငျသညျ, ထို့ကွောငျ့, ဖို့ပိုက်ဆံပေးပို့ LocalBitcoins မရောင်းချသူ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ရောင်းသူလည်းအတူတူပင်ပလက်ဖောင်းမှ Bitcoin ပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။ နှစ်ဖက်စလုံးဟာသူတို့ရဲ့ရန်ပုံငွေအတွက်စေလွှတ်ပြီပြီးတာနဲ့ပလက်ဖောင်းကိုသင်ဖို့ရောင်းချသူဖို့ပိုက်ဆံဖြန့်ချိခြင်းနှင့် Bitcoin ။
3. သင့်ရဲ့လက်ခံရရှိသူဖို့ Bitcoin မကယ်မလွှတ်
သင်သည်သင်၏ Bitcoin ရရှိထားပြီးတာနဲ့, သင့်မှသင်၏လက်ခံရရှိသူရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ကသူတို့ကိုလွှဲပြောင်း LocalBitcoins ပိုက်ဆံအိတ်။
4. စာလက်ခံသူက Bitcoin ရောင်းချ
သင့်ရဲ့လက်ခံရရှိသူနောက်ဆုံးတွင် Bitcoin ရောင်းချနိုင်ပါတယ်။
ဒါကသူတို့အပျေါမှာရောင်းချနေဖြစ်ပါသည် LocalBitcoins တစ်ဦး optional ကို Fiat ငွေကြေးအဘို့။ နိမ့်ဆုံးအပြောင်းအရွှေ့စရိတ်ရှိပါသလား? အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးသို့မဟုတ်အများဆုံးန့်သတ်ချက်ရှိပါတယ်။ ဘယ်လောက်တဦးတည်းလုပ်နိုင်တဲ့လွှဲပြောင်းတစ်ဦးချင်းစီရောင်းသူနှင့်ဝယ်ယူသူပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဘာတွေလဲ LocalBitcoins ငွေလဲနှုန်း? ပလက်ဖောင်းငွေလဲနှုန်း Bitcoin မသတ်မှတ်ပါဘူး။
အဲဒီအစား, တစ်ဦးချင်းစီဝယ်လက်နှင့်ရောင်းသူသူတို့ရဲ့နှုန်းထားများထားကြ၏။ ဒါဟာကွဲပြားနှုန်းထားများရှိခြင်းများအတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူသည့်အခါ Bitcoin ကနှစ်လယ်ပိုင်းစျေးကွက်နှုန်းထားညီမျှရဲ့တစ်ဦးလဲလှယ်မှုနှုန်းကိုဖြတ်ပြီးလာရန်ဖြစ်နိုင်ခြေပါပဲ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ဒီအသုံးပြုသူများသည်ကိုလည်း Bitcoin ရောင်းချထဲကတချို့နည်းနည်းအမြတ်ဖြစ်စေလိုစဉ်းစားနေတဲ့ရှားရှားပါးပါးမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပိုပြီးမကြာခဏမထက်သင်နှစ်လယ်ပိုင်းစျေးကွက်မှုနှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားကြောင်းတစ်ခုလဲလှယ်မှုနှုန်းကိုဖြတ်ပြီးလာပါလိမ့်မယ်။ အကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းမှုမကြာခဏလယ်ပိုင်းစျေးကွက်နှုန်းထားထက်အကြောင်းကို 1% ပိုမိုမြင့်မားကြလိမ့်မည်။
LocalBitcoins 200 နိုင်ငံများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းထက်ပို 14,000 မြို့ကြီးများကိုကျော်တစ်ဦးရှိနေခြင်းတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏ဦးခေါင်းရုံးဖင်လန်နိုင်ငံ Helsinki ဖြစ်ပါတယ်။ LocalBitcoins သငျသညျ 100 ငွေကြေးကျော်အတွက်ကုန်သွယ်မှုမှခွင့်ပြုပါတယ်။
Bitcoin ဝယ်ယူရောင်းချခြင်းသောအခါ, သင့်လျော်သောကုန်သွယ်ရေးမိတ်ဖက်စုဝေးဖို့ခဏတစ်ယူပေလိမ့်မည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်, တကရောင်းချသို့မဟုတ်ဝယ်ယူဖြည့်ဆည်းဖို့ကြာအချိန်ပမာဏကိုသင်နှင့်သင့်မိတ်ဖက်ဖို့ရန်ပုံငွေပေးပို့ဘယ်လောက်မြန်မြန်ပေါ်မူတည် LocalBitcoins။ Bitcoin ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာပြီးစီးရန် 10 မိနစ် 60 အကြောင်းကိုယူပါ။
ဒါဟာထို့ကြောင့်ချောမွေ့ငွေလွှဲရာအရပ်ကိုကြာလျှင်, ငွေပေးငွေယူနာရီအနည်းငယ်အတွင်းအပြီးသတ်နိုင်ဆိုလိုသည်။ တခါတရံသူကဖြည့်စွက်ဖို့တစ်နာရီယူပေလိမ့်မည်။
ကောင်းပြီ, နာမတော်ဖြင့်သွား LocalBitcoins သာယခု Bitcoin ထောက်ခံပါတယ်။ Bitcoin ကုန်သွယ်ယခုနှစ် 2012 ကတည်းကသူတို့ရဲ့သော့ချက်အင်္ဂါရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့သည်မကြာမကအခြား cryptocurrencies ထည့်သွင်းဖို့အစီအစဉ်တစ်ခုရှိပါက၎င်းသည်မသိရပါတယ်။ သို့သော် LocalEthereum နှင့်ဆက်စပ်သောသောဝက်ဆိုက် LocalBitcoins ဒါပေမဲ့သူတို့ကနည်းပညာပိုင်းအတူတူမရှိကြပေ။
ပလက်ဖောင်းအထူးသဖြင့် 248 နိုင်ငံများထက် ပို. ၎င်း၏ရှေ့မှောက်တွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ့်အားကောင်းတဲ့စျေးကွက် positioning ကိုရှိပါတယ်။ အများစုမှာအသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ privacy ကိုကိုချစ်ထို့ကြောင့်မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာထုတ်ဖော်ရန်ဆန္ဒရှိကြပါဘူး။ သူတို့ကအရာအမည်မသိနည်းလမ်းသုံးစွဲဖို့ပိုနှစ်သက် LocalBitcoins ထောက်ပံ့။ အဆိုပါလဲလှယ်ပလက်ဖောင်းယခုနှစ်၏နောက်ဆုံးဝက်အတွင်း 13.85 သန်းအမြင်များ secure နိုင်ခဲ့သည်။
အဖိုးအခသည်အခြားပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်အတော်လေးမြင့်မားတဲ့ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ပါတယ် LocalBitcoins ယင်း၏အခကြေးငွေအတော်လေးအလင်းဖြစ်တော်မူပြီ။ ပလက်ဖောင်းရောင်းသူထံမှ 1% တစ်ခုကော်မရှင်အားသွင်းပေးပါတယ်။ အကြောင်း, ကြော်ငြာ posted ကြသူတစ်ဦးချင်းစီသည်။ သို့သော်ဝယ်လက် Bitcoin ၏စျေးနှုန်းဗဟိုဖလှယ်မှုတွင်တွေ့ဘာထက်ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်လိမ့်မည်ကိုသတိထားပါရန်လိုအပ်သည်။
mainstream ဖလှယ်မှုအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့အရောင်းအအနှံ့ကော်မရှင်အားသွင်းခြင်းနှင့်ဤအရပ်မှစျေးနှုန်းချိုသာ Bitcoin စျေးနှုန်းများအတွက်အကြောင်းပြချက်ထက် LocalBitcoins။ ဒီပလက်ဖောင်းပေါ်စျေးသည်ဝင်ငွေ generate တစ်လမ်းအဖြစ်သူတို့ရဲ့ရောင်းစျေးနှုန်းကိုတိုးမြှင့်။ သူတို့ကအစ PayPal ကငွေပြန်အမ်းမှုအစပျိုးခြင်းနှင့်ဤအရပ်မှအန္တရာယ်များဤမျိုးလျော့ပါးမှပိုမိုမြင့်မားအားသွင်းဖို့ကြိုးစားစေခြင်းငှါတစ်ဦးချင်းစီမှရောင်းချအန္တာရာယ်။
LocalBitcoins ကုန်သွယ် secure ဖို့ဒီဇိုင်းဖြစ်ကြောင်း features တွေအမျိုးမျိုးထည့်သွင်းထားသည်။ ဤအင်္ဂါရပ်များပါဝင်:
ကုန်သွယ်ရေးအစပျိုးခဲ့ပြီးပြီးတာနဲ့ကိုစလှေတျခဲ့ပွီဟုမဆိုငွေသားသို့မဟုတ် Bitcoin အာမခံငွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအားဖြင့်ပလက်ဖောင်းများတွင်ကျင်းပကြသည်။ ဆေးရုံကဆင်းဖို့ရန်ပုံငွေအဘို့, ရောင်းချသူဖလှယ်အောငျမွငျခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုရန်ရှိပါတယ်။
LocalBitcoins တစ်ဦးတက်ကြွထောက်ခံမှုအဖွဲ့သည်ရှိပြီးသူတို့မကြာခဏအီးမေးလ်များကိုတုံ့ပြန်ရန်အမြန်ဖြစ်ကြသည်။ အီးမေးလ်များကိုဆက်သွယ်ရေးသူတို့ရဲ့အဓိကပုံစံရှိပါတယ်။ ပလက်ဖောင်းလည်းအသုံးပြုသူများကိုကိစ္စရပ်များနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုကိုလမ်းညွှန်မှုဆွေးနွေးရန်ခွင့်ပြုမယ့်ဖိုရမ်အိမ်ရှင်အဖြစ်။
နှစ်ဦးက factor authentication:
ဟက်ကာအမြဲနည်းပညာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရပြီ။ ဒါဟာသင့်အကောင့်လုံခြုံရေးမြှင့်တင်ရန်တစ်ခုထပ်တိုး PIN ကုဒ်ရှိသည်ဖို့ထို့ကြောင့်လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ခု factor authentication နှင့်အတူအသုံးပြုသူများကသူတို့ဖုန်းပေါ်မှာတိုက်ရိုက် PIN ကုဒ်တစ်ခုလက်ခံရရှိနေဖြင့်၎င်းတို့၏ရဲ့ login အတည်ပြုဖို့ရှိသည်။
ဤပလက်ဖောင်းတွင်ကုန်သည်ကြီးများသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုပေါ် မူတည်. အဆင့်နေကြသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့၏တုံ့ပြန်ချက်နှုန်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကုန်သွယ်သမိုင်းကြည့်ဖို့အဖွဲ့ဝင်များအားလုံးရရှိနိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးကို client မှာဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှုဝန်ဆောင်မှုမဆိုပြဿနာများကိုဖြတ်ပြီးလာဖွစျသှားပါလျှင် LocalBitcoins ပဋိပက္ခ resolution ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမှာပါ။ သူတို့ကဒီကိစ္စကိုသို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့်ရောင်းသူနှင့်ဝယ်ယူသူအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုများဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းရှာပါ။
သလောက် LocalBitcoins ဒါကြောင့်သတိထားယူနေဆဲလိုအပ်သောင်၎င်း၏ site ကိုလုံခြုံရေးစနစ်များကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ တခါတလေ အချို့သောအပေးအယူမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကောင်းပါတယ်။
ယေဘုယျအားလိမ်လည်မှု, LocalBitcoins သငျသညျကွဲပြားခြားနားနောက်ခံကနေအမျိုးမျိုးသောလူတို့နှင့်အတူ Bitcoin နှင့်ငွေဖလှယ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာစျေးကွက်စေ့စေ့ကြည့်ရှုရန်ရွယ်တူပါပဲ။ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကောင်းသောကြည့်သောအပေးအယူများသတိထားပါ။
ပလက်ဖောင်းငွေပေးချေ၏ကွဲပြားခြားနားသော Modes သာလက်ခံမေးသောအခါအသင်တို့ရှေ့မှအသုံးမင့်နည်းလမ်းများမှတဆင့်တစ်ဦးငွေပေးငွေယူလုပ်သတိပြုရကြမည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သငျသညျဆုကြေးဇူးကို codes တွေကိုပြန် Bitcoin ဖလှယ်တဲ့အခါမှာသတိထားဖြစ်ရရှိပါသည်, တက High-အန္တရာယ် option ကိုပါပဲ။
သငျသညျ In-လူတစ်ဦး Bitcoin ဖလှယ်၏ထို option ကိုစဉ်းစားပါလျှင်, ကောင်းစွာ-လူဦးရေဖြစ်ကြောင်းဒေသများရှိဖလှယ်ဖို့အာမခံပါသည်။ သငျသညျအရာတစ်ခုခုပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခံစားရလျှင်စာချုပ်ဖျက်သိမ်းတှနျ့ဆုတျမထားပါနဲ့။
ဒါဟာနည်းလမ်းများအမျိုးမျိုး Bitcoin ဝယ်ယူရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အများစုမှာငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များကမိုဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ်ထဲကနေဘဏ်ဝါယာကြိုးများအထိ, ဒီမှာလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။
cryptocurrency ကုန်သွယ်နှင့်အခြားဖလှယ်မှုပိတ်ပင်ထားကြသည်ဘယ်မှာအများဆုံးနိုင်ငံများမှာ, Bitcoin ဝယ်ယူရန်တစ်ခုတည်းသောပလက်ဖောင်းပါပဲ။
ဒါဟာ 248 နိုင်ငံများနှင့် 15,582 မြို့ကြီးများထက်ပိုပြီးအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပါတယ်။
ဒါဟာငွေသုံးပြီး Bitcoin ကိုဝယ်ခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သမျှပါပဲ။ ဝယ်လက်နှင့်ရောင်းသူသူတို့ကငွေကြေးအရောင်းအဝယ်အတွက်ငွေသားသုံးနိုငျတဲ့အတွက်လူတစ်ဦးကုန်သွယ်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သင်၏အထဲသို့ Bitcoin ၏သဘောတူညီခဲ့အရေအတွက်လက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ် LocalBitcoins ပိုက်ဆံအိတ်။
လျင်မြန်စွာနဲ့ချက်ချင်းကုန်သွယ်မှု။ သင်ကသဘောတူငွေပမာဏကိုပေးဆောင်ကြောင့်ရောင်းချသူကစိစစ်ရဲ့ပြီးတာနဲ့သင် Bitcoin တိုတောင်းတဲ့အချိန်အတွင်းမှာသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်မှအသိအမှတ်ပြုရပါလိမ့်မယ်။
သူတို့ဟာ Fiat ငွေကြေးအမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့။ သငျသညျကို USD, ပေါင်, ဒါမှမဟုတ် EUR အတွက်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်စိုးရိမ်ရန်မလိုပါ။
သူတို့ကအပိုလုံခြုံရေးအစီအမံများရှိသည်။ အားလုံးအသုံးပြုသူအကောင့်နှစ်ခု-Factor စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းနှင့်အတူ enabled ပါပြီ။ တစ်ဦးကရဲ့ login-ကိုယ်ရံတော်လည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးရဲ့ login တစ်ဦးကွဲပြားခြားနား browser ကနေဖန်ဆင်းထားသည်ဆိုပါကသင်ကချက်ချင်းအကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။
ဒီပလက်ဖောင်းပေါ် Bitcoin ၏ဝယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကသာတစ်ဦးချင်းစီပြီးစီးခဲ့ကုန်သွယ်ရေးအပေါ်တစ်ဦး 1% ပြားချပ်ချပ်အခကြေးငွေ။
ဒါဟာ cryptocurrency ရောင်းချရန်သို့မဟုတ်ဝယ်ယူရန်ပုဂ္ဂလိကလမ်းပါပဲ။ အသုံးပြုသူတစ်ဦးအဖြစ်, သင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုဝေမျှဖို့မလိုဘဲအရောင်းအဖြည့်စွက်ပေးနိုင်သည်။ LocalBitcoins သင်တို့ကိုလည်းသူတို့နှင့်အတူမျှဝေတော့မဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ပေးရန်တာဝန်ရှိသည်သမုတ်သော။
ဒါဟာတစ်ဦးက New York မြို့အပါအဝင်အမေရိကန်ပြည်နယ်များအရေအတွက်, အဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောဂျာမဏီအဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးပြီးတိုင်းပြည်များတွင်ရရှိနိုင်ပါဘူး။
Scan ကိုတစ်ဦးအဆုံးမဲ့စာရင်းရှိပါသည်။ မကြာခဏကုန်သွယ်ရေးဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ကြဘူးသူကိုအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်တစ်ဦးပိတ်ပင်မှုရ LocalBitcoins။ ရောင်းသူတစ်ဦးကသင်၏ပိုက်ဆံအိတ်မှ Bitcoin မကယ်မနှုတ်ခဲ့ဘူးသောကွောငျ့သငျသညျပိုက်ဆံဆုံးရှုံးလျှင်သို့သော်ဘယ်သူမှသင်ကူညီရှိရလိမ့်မည်။ သူတို့က Scan ကိုဖြစ်နိုင်ခြေနှင့် ပတ်သက်. အသုံးပြုသူများကိုသတိပေးထို့ကြောင့်သင်ကသားကောင်လဲကြလျှင်သင်လျော်ကြေးပေးလို့မရပါဘူး။
ရောင်းသူ (ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းမှ) သင့်ငွေပေးချေမှုကိုခံယူခြင်းနှင့်သူတို့ကခံယူမသတင်းပို့လို့ရပါတယ်။ အဆိုပါ Bitcoin ထို့ကြောင့်သင့်အကောင့်သို့အပ်ကြသည်မဟုတ်။ ကဖြစ်ပျက်လျှင်, သင်တိုင်ကြားနှင့်ပေးနေတဲ့အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်ရောင်းသူမှသို့သော်သင့်ပိုက်ဆံပြန်မရကြလိမ့်မည်နိုင်ပါ။
သင်ငွေသား option ကိုသွားကြဖို့ရွေးချယ်တဲ့အခါသင်အခကြေးငွေများမြင့်မားမှုနှုန်းစွဲချက်တင်နေကြသည်။
ဒါဟာဆိတ်ကွယ်ရာ Bitcoin ထံမှ cryptocurrency တခြားအမျိုးအစားနှင့်အတူကိုင်တွယ်မထားဘူး။
အသစ်သောအသုံးပြုသူများကို Bitcoin ရောင်းချရန်သို့မဟုတ်ဝယ်ယူရန်တို့အတွက်ဒါဟာသူတို့အဘယ်သူမျှမ ratings ရှိသည်ကြောင့်ဒီဖြစ်ပါသည်, အတော်လေးခက်ပါတယ်။
LocalBitcoins ငွေသားနှင့်ဒိုမိန်းစေ့စေ့ကြည့်ရှုရန်ရွယ်တူ အသုံးပြု. Bitcoin ကိုဝယ်ခြင်းငှါသာပစ္စုပ္ပန်နှင့်တက်ကြွပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင် Bitcoin ဆည်းပူးဖို့ကိုသုံးနိုင်သည်အလွယ်ကူဆုံးပလက်ဖောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးမျိုးသောငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များကဒီ platform ပေါ်တွင်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ကြပြီးသူတို့ကန့်သတ်ရောင်းချသို့မဟုတ်ဝယ်ယူစည်းကြပ်ပါဘူး။ သူတို့ကအစသာတစ်ဦးချင်းစီပြီးစီးခဲ့ငွေပေးငွေယူများအတွက် 1% ပြားချပ်ချပ်အခကြေးငွေ။ အသုံးပြုသူများယုံကြည်ထားသည်ဟုရောင်းသူသတိထားရပါမည်။
တချို့ကအပေးအယူမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကောင်းသောဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင့်ပိုက်ဆံပြန်ရဖို့လမ်းမရှိမယ့်ရောင်းသူမှကယ်နှုတ်တော်မူ၏ထားပြီးတစ်ကြိမ်။ ဒါ့အပြင်ဒီ platform ပေါ်တွင် Bitcoin စျေးနှုန်းများသာမန်ကူးလူးဖလှယ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းငယ်မြင့်မားတဲ့ဖြစ်ကြသည်။
Tags: localbitcoins ဝယ်ဖို့, localbitcoins အပေါ်ရောင်းဖို့ဘယ်လို, localbitcoins သုံးစွဲဖို့ဘယ်လို, localbitcoins လုံခြုံ, localbitcoins, localbitcoins app ကို, localbitcoins အခကြေးငွေ, legit localbitcoins, localbitcoins ရဲ့ login, localbitcoins မှတ်ပုံတင်ရေး, localbitcoins ပြန်လည်သုံးသပ်, ဘေးကင်းလုံခြုံ localbitcoins, localbitcoins ပိုက်ဆံအိတ်